Tag: dokambarotra zanatany | Martech Zone
Tag: dokam-barotra zanatany
Ny marketing amin'ny atiny dia eny rehetra eny ary mihasarotra hatrany ny mamadika ny prospecta ho mpanjifa maharitra amin'izao fotoana izao. Ny orinasan-tserasera iray dia mety tsy hahatratra na inona na inona miaraka amin'ny mekanisma fampiroboroboana karama, saingy afaka manatsara ny fahatsiarovan-tena sy mitondra vola amin'ny fampiasana dokam-barotra zanatany. Tsy foto-kevitra vaovao eo amin'ny sehatra an-tserasera io, saingy marika be loatra no mbola tsy manararaotra azy amin'ny fomba feno. Manao fahadisoana lehibe izy ireo satria voaporofo fa iray ny dokam-barotra zanatany
Raha efa ela ianao no nivarotra ny vokatrao ka tsy nisy vokany tsara izany dia angamba fotoana niheveranao ny dokam-barotra tompon-tany ho vahaolana maharitra amin'ny olanao. Ny dokam-barotra tera-tany dia hanampy anao, indrindra raha ny fanamafisana ny doka media sosialy misy anao ary koa ny fampiasàna ireo mpampiasa kendrena mafy amin'ny atiny. Fa aloha, andao hiroboka amin'ny dokam-barotra zanatany alohan'ny hieritreretantsika ny fomba.
Tamin'ity taona ity aho dia niasa tamina asa ambony roa. Ny iray dia ampahany tamin'ny fivoarako matihanina, hianarana izay rehetra azoko atao momba ny faharanitan-tsaina (AI) sy ny marketing, ary ny iray kosa nifantoka tamin'ny fikarohana teknolojia fanabeazana momba ny doka isan-taona, mitovy amin'ilay naseho teto tamin'ny taon-dasa - Native Lands Technology Technology Landscape 2017. Tsy dia fantatro tamin'izany fotoana izany, fa ebook iray manontolo no nivoaka tamin'ny fikarohana AI taty aoriana, "Izay rehetra ilainao
Araka ny nofaritan'ny FTC, ny dokam-barotra zanatany dia mamitaka raha misy ny fanolorana diso ara-nofo na koa misy fanalana fampahalalana izay mety hamitaka ny mpanjifa manao zavatra mety amin'ny toe-javatra. Fanambarana voafaritra tsara izany, ary tsy azoko antoka fa te hiaro tena amin'ny fahefan'ny governemanta aho. Inona ny atao hoe Advertising Native? Ny Federal Trade Commission dia mamaritra ny dokam-barotra avy any an-toerana ho toy ny atiny rehetra izay itovizany amin'ny vaovao,
Tsy afaka manadino ireo mpanao dokambarotra fironana 10
Talata, Aogositra 9, 2016 Alakamisy, Aogositra 11, 2016 Michael Korsunsky
Ao amin'ny MGID, mahita doka an'arivony izahay ary manolotra an-tapitrisany maro amin'izy ireo isam-bolana. Izahay dia manara-maso ny zava-bitan'ny doka rehetra atolotray sy miara-miasa amin'ny mpanao dokam-barotra sy ny mpanonta mba hanatsarana ny hafatra. Eny, manana tsiambaratelo zarainay amin'ny mpanjifa ihany izahay. Saingy, misy ihany koa ireo fironana sary lehibe tianay hizara amin'ny olona liana amin'ny doka fampisehoana zanatany, antenaina fa hahazo tombony amin'ny indostria iray manontolo. Ireto misy fironana 10 lehibe izay